Mai Chibwe VekwaZimuto: Mazano okuramba kuvata noumwe wako.
Pano ndoda kumbotaura nenyaya dzinoshandiswa mudzimba semazano okurama kurhajana nomukadzi/murume wako mumba asi usingadi kunatsobuda pachena kuti uri kuramba. Vanhu vakawanda chose vanogwadziwa moyo nokuramigwa newawakaroorana naye. Vanonyanyokomburena varume asi chokwadi ndechokuti vakadzi vanorambigwawo asi kuti zvinovasvodesa kutaura kuti murume akaramba kuvata naye. Ukazoona mukadzi otaura kuti murume wake ari kumurambira, nyaya yavo yasvika kwakadzika chose.
Saka tichitarisa marambire acho anoitwa tinoona maramire akaita seawa:
Kuhwa musoro: Kune vakawanda vanoti kana nguva yokunovata yoda kusvika votanga kuhwa musoro. Kazhinji inyaya yokusada kuvatana noumwe wako. Kana uri munhukadzi hwisisa kuti kunatsoiswa nomurume wako zvakanaka zvinopedza kugwadza kwemusoro kuvanhu vanoita 93% kouta vamwe vashomanana vasina zvinoitika kwavari kozoita vashomashoma vanoitiswa musoro nokuda kwekuiswa.
Kukasira/kunonoka kunovata: Kune vaya vamwe vanoti kana asingadi zvinhu musi iwoyo anokasira kunovata kuitira kuti umwe wake paanozouya, anenge atobatwa nehope. Izvi zvinoshanda kana une murume mukadzi anoti monovata okumbira. Kana une vaya vanongokusundidzira nokukusimudza gumbo kuti vawane mapinzire, hazvishandi. Unongoiswa zvakadaro. Koitazve vaya vanoiswa vari kuhope.
Kana murume wako akakasira kundovata uchiziva kuti haasi kuda zvinhu musi uyu, funga zvokuita. Unokwanisa kuendavo kunovata kuti akubudire pachena kuti haasi kuda, uye akuudze chikonzero. Kana kuti unozosara wotevera wosvikomupurudzira chombo kuti chimire.
Kuneta: Kuneta kwevakadzi nevarume kwakasiyana pakuitisa kana kushaisa zemo. Mukadzi akaneta anokwanisa kuudza murume wake kuti akaneta saka hapana chaanoita pabasa. Murume ngaaite ega. Hazvinetsi kungovata nedumbu murume okutanyana okirhoja zvinyoronyoro kusvika aguta. Mobva mavata hope. Asi vamwe vedu munhu anenge achida kutaridza murume kuti aneta saka obva aramba kuiswa.
Murumewo kana akaneta, pamwe anotadza kumira chombo. Pamwe anongoti akaneta kuti usamunetsa pazviri. Iwe wega unoona kuti umwe wako akaneta zveshuwa. Kana akaneta asi achida iwe mukadzi kwira murume umbomukoirawo kusvika maguta. Kuneta haisi nyaya huru. Ukaona munhu achingoti napo napo okuudza kuti akaneta, zvinoreva kuti haachadi zvinhu. Kwava kutoramba.
Kuwedzera maSHIFT kubasa: Kune vaya vanoshanda maSHIFT. Zvinokwanisika kuti kana maSHIFT akawanda kubasa munhu ouya kumba oti haadi kuvatana nokuti akaneta. Anenge agara ane fungwa yokusada kuvata newe. Kana uchiziva kuti kubasa kwawanda basa, taura nomurume/mukadzi wako muchinje nguva dzokunovata. Zvokuona TV mombosiyana nazvo.
Kutsamwa: Vakawanda vanonyimana kana vatsamwisana. Pane nyaya mbiri dzinoti mese munotadza kuwana mukana wekukumbirana mese mobva mangoti zii kusvika hope dzabata. Kana uri munhukadzi, usajaidza murume wako kuvhenganisa kutsamwa nezvokuvatana. Kuvatana kuri muCATEGORY yako kwega zvokuti unofanira kuudza murume wako kuti kutsamwa kwake hakunei nokuvatana. Kuvatana kwenyu ndezvokuti muri murume nomukadzi. Kutsamwisana ndezvokuti hamugoni kutaurirana zvakanaka. Tanga imwe nyaya kana murume asingadi kuvatana achiti nokuti akatsamwa. Kushaya njere. Kukonana kwefungwa kwanasiyana nezvido zvemuviri.
Kana iwewo mukadzi ukatsamwira murume tsamwa hako asi fongora murume aite basa. Usavhenganisa nyaya dzisingavhengani. Ndiwe uchazoita dambudziko meri uko kana murume aita fungwa dzokuti zvinokwanisika kushaya rhoji mumba make.
Asi tinohwa vakawanda vachinyimana nokuda kwekutsamwa. Kusahwisisa mamirire eupenyu hwevanhu, uye kuti chii chingaitika kana ukatora zhira yakadai.
Kupomerana mhosva: Kune vanhu vakawanda vasina kunatsogarika mufungwa pamagarire avo pamusha zvokuti akangoona chimwe chinhu chisina maturo ototanga kuunongedzera mumwe kuti waita chokuti nechokuti asi pasina chinangiso chaicho. Munhu akadai anokwanisazve kuda kukupanicha nokukunyima muviri wake kuti unakigwe nawo. Mhosva zhinji dzinopomegwa vanhu ndedzemari, chihure. kusada hama dzake, kusamuterera, uroyi, kana kusageza zvakanaka. Ukahwa nyaya yakadai yatanga mumba mako chiziva kuti nyaya yotevera kunyimwa zvinhu.
Mhosva zhinji dzinoitika mufunwa yomunhu ari kukupomera. Iwewo chiona kuti nyaya yake iri papi uzame kuigadzirisa, kwete kutangawo kupopota kusvika mese mava noubenzi.
Kutya zvigwere: Vakawanda vedu tinotya kubata zvigwere. Kana usina shuwa yokuti umwe wako ange aripi, asi uku usingadizve kumunyima, gara une makondomu mumba moita mutemo wekuti nani kushandisa makondomu pane kushandisa mapiritsi emimba. Zvadaro haupiwa chigwere. Kana wakambobatwa uchihura, kana kuti iye uyu waunaye ari munhu wawakatanga kudanana naye pachihure kuzosvika maroorana, unenge uchiziva mufunwa dzako kuti munhu asingavimbiki. Shandisai makondomu.
Kushaya zemo: Vanhu vese zvavo vanomboita nguva yokuti unoshaira umwe wako zemo zvokuti unoshaya hanya nokuvatana naye. Kana uri munhukadzi wana zano rokuti murume akuise nguva nenguva chero usina zemo. Kana uri munhurume zama kuchinja nuva yakuisana nomukadzi wako. Sokuti kana muchisiisana monovata zama kuti muite mangwanani. Varume vakawanda vanomira chombo mangwanani saka unokwanisa kuti muvatane nguva iyi.
Kujairira kuisana zvinobhowa: Kuti zuva nezuva mongita izvozvo zvimwezvo, chinhu chinoita mubhowekane nokuvatana, zvokuti unozoon umwe asisina hanya nazvo, nyaya yotanga kunetsa. Vanhu potaiwo muchiita zvamusingasiiti kuti nyaya inakidze. Kana muchibhowana unohwa mukadzi achiti murume anobhowa, murumewio achiti mukadzi anobhowa. Ukahwa zvadai ziva kuti mukadzi ndiye anobhowa. Mukadzi ndiye MANAGER wezvokuvatana mumba. Ndiye anofanira kuudza murume kuti zvokungoramba tichiita zvimwezvo zvinobhowa. Dai tambozamawo zvimwe tione kuti zvinodii. Mukadzi haafaniri kumirira kuti murume amuti fongora, vata nedumbu, simudza gumbo, furatira, kwira pamusoro, etc. Iye ega ngaangoita murume atevedzere izvozvo. Kwete kumirira kuudzwa. Iwe mukadzi ndiwe unoziva pane chitubu chako. Unodirei kuti murume akuudzi mapinzigwe achinoita. Mutaridze chitubu apinze zvipere.
Kunyimana mumba: Kunyimana chinhu chakaipisisa. Kana uchida kukasira kuputsa musha wako tevedzera zvokunyimana izvi. Kana uri munhu akachenjera, one kuti unogarovata noumwe wako mese muchiguta.
Kana umwe wako akatango kuonekera zano rokuramba kuisana newe, iwe chikasira kufunga mazano okuzvigadzirisa. Chokutanga kuhwisisana pakutaura. Kana umwe wako achigaroti akaneta, iwe mubatsire pamabasa anomunetesa acho. Zvadaro muitire zvausingachiiti. Unokwanisa kumuisira mvura yokugeza, wobva wanomugezesa womupukuta, zvausinachiiti. Kana pane mabasa aunokwanisa kumubatsira, kasira kumubatsira.
Kna uchionawo kuti zvokuvatana kwenyu zviri kubhowa, wedzera zvokuita kuti zvinakidze. Enda naye kumwe kure nomusha mundoitirako. Hwisisa kuti kuzosvika arambe kuvata newe pane zviri kumudya pamoyo. Hakuna munhu asingagwadziwi nokunyimwa zvinhu nomunhu waanoda waakaroorana naye. Vashomazve vanowana zviri nyore kunyima umwe wake. Saka mese menge muri vanhu vari pasinganakidzi. Zvinoda umwe wenyu ave ane njere dzokukasira kugadzirisa nyaya.
Kunemi vachiri vechidiki, ukaona majaidzana kuti umwe akafunga zvokunyima umwe ongoti zii pazviri, upenyu hwenyu huchakunetsai mberi uko. Vanhu dzidzai kuvatana zvakakwana somurume nomukadzi mumba menyu kuti muite mufaro.
Kana muchida kuwedzera kutaudzana, dzidzai kuti mapedza kuvatana murume anotenda mukadzi wake, mukadziwo otenda murume, moita kanyaya kadikidiki musati mabatwa nehope. KUtaudzwa mapedza kuisana zvinofadza nokuti mese menge makati tonho muviri saka unoterera zviri kutaugwa.
Usada kutsvaka mazano ukurambira umwe wako. Tsvaka mazano okuti zviwedzere kunakira mese.
Saka todii kuti tisanyimana mudzimba:
1 Jairira kuti pakaita nyaya mumba menyu mokasira kuigadzirisa kuti musaita nuva makatsamwisana
2 Kana nyaya yagadziriswa ikapera chikasirai kudzokera panguva yakanaka. Usada kuramba une nyaya iwe wamboti yapera.
3 Zemo rinobva mufungwa dzako iwe kwete kuti umwe wako anokupa zemo. Iwe pachako jaira kugara uchipota uchifunga zvokuita pamukadzi/murume wako. Mifungo yakadai ndiyo inokupa zemo. Jairazve kugaroudza umwe wako maitire amakamboita ukanakidzwa nazvo.
4 Garofunga maitire matsva ukozama kuita amusina kumboita. ita chimwe chinhu chitsva kamwe chete pamwedzi chinobata umwe wako akarivara. Sokuti kumuwana achigeza wototanga kumubata bata pamberi mubhavhu, wopinda wogeza naye womumisa chombo., Kumutsa murume kumuudza kuti uri kuda kuiswa. Kufumoudza murume kuti warota achikuisira mugomo rokwanhingi.
5 Ita tsika yokuudza murume kuti akaita ichi kana icho unopa zvinhu paanongopedza. Sokuti "enda unotenga muriwo kumagirosa" Akati haadi woti "ukaenda ndokubvisira bhurugwa paunodzoka." Achingodzoka iwewo chibvisa bhurugwa. Mapedza kuisana simuka ubike muriwo womusiya akambozorora. Mangwana ukamuporomisa haarambi. Izvi zvinoita muita nguva dzakasiyana uye maitire anopa zemo.
6 Endai musango, mumunda, mugadheni, mumota, Ukaona nzvimbo isingasvikwi nevanhu, kwezva murume wako muendeko moitira ikoko.
7 Usajaira kugaropopota mumba. Kupopota kunoderedza CONFIDENCE youmwe wako kukuudza zvaanoda. Kana wambopopota ukaona kuti haana mufaro. Muudze kuti akutsamwisa asi uchamupanicha pakunovata saka ngaatogadzirira, uye kana akaita zvinogutsa nyaya yapera. Mava kunovata muudze kuti ari papanichi saka zvoitwa sei. Usarega achivata musina kuisana nokuti mangwana anomuka nyaya yakangodaro. Mangoisana chimuudza kuti agona basa uye panichi yapera. Iyewo akazokupanicha umwe musi chibvuma kupanichwa.
8 Kana ukakumbira kuvata naye iye akaramba chazvo izvo tanga kuzvibatabata iye aripo Varume zvinovanetsa kuhwa uchizvibatabata agotadza kumira chombo. Varume vanofanirazve kugaroudzwa kuti chero paadira ngaataure anobvumidzwa. Ndizvo tichikurudzira kuti usanyima murume nokuti anoita PSYCHOLOGICAL ISSUES dzisingagadziriki nokukasira. Murume ngaazive kuti paamirira chombo iwe unomubvumira.
Kuvanhukadzi, kuiswa kunotaridza rudo. Imi varume hwisisai kuti ukaramba kuvata nomukadzi wako zvinotaridza kuti haumudi. Kna wakaneta rega iye akukwire. Iwe misa chombo chete akwanise kukukwira. Kwete kurama kumuisa iye achitaridza zemo.
9 Nyaya yokupesa nokuda kwema SHift. Kana musina vana pfigiranai mumba paweekend muite nguva yokungofadzana chete. Kana mune vana tsvakai anokucheneterai vana kwezuva rimwe chete ramunosanganga pavhiki. Mopedzerana shungu dzese ipapo. Asi chokwadi ndechokuti kushanda musingagorosangana hakubatsiri chinhu. Vanhu vakaroorana munofanira kuita nguva yokuvatana yakakwana. Zvinoderedza BP, zvoderedza hasha, zvoderedza kufunganya, zvokurudzira kuvimbana. Munhu anotaridza kuda kuisana noumwe wake munhu anoonekwa ari akavimbika kupfuura asina hanya nazvo.
Kana usisadi munhu, siyana naye ugare wega hana yakadzikama. Kugara nomunhu wausingadi kuvata naye zvinokuitisai BP nokufunganya uye zvinowedzera kuhurirana zvinoreva kuti nyaya dzenyu dzotowanda. Saya ugare wega.
Posted by Mai E Chibwe at 14:41
Ini newangu mudzimai hapana kana chikonzero, asi kungoti haadi zve kuvatana neni chete. Dzimwe nguva tinotoita ma svondo matatu chaiwo achingoti "ndirikuda kurara, Ndinehope" kana kungoti" ko sei uchimanikidza vamwe zvavasingadi"?
Amai Chibwe Forum yamuka
Come create topics of discussion and chat nemaZimba pa forum yedu nyowani: http://zimbaforums.proboards.com/
Pro boards inoda kuti ichi tanga, yagarisa iri ziii.